अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने कर्मचारीको प्रयास ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने कर्मचारीको प्रयास !
काठमाडाै, २२ जेठ । मंगलबार विहानैदेखि नेपालको शेयर कारोबार ठप्प हुन पुगेको छ ।
मंगलबार शेयर कारोबार नभई बजार बन्द भएका छ । बजेटमार्फत शेयर कारोबारमाथि थप कर लगाएको सरकारले बोनस र हकप्रद शेयरमाथि समेत अनावश्यक करको भार थोपरेपछि लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका हुन् । सोमबारदेखि नै आन्दोलनमा रहेका शेयर कारोबारीहरुले मंगलवारदेखि सम्पूर्ण शेयर कारोबार नै ठप्प बनाएका छन् ।
नेप्सेका अनुसार मंगलबार एक कित्ता पनि शेयर कारोबार भएको छैन । शेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर कारोबार छोडेर आन्दोलनमा होमिएका कारण शेयर बजार ठप्प भएको हो । सेयर कारोबारबाट दैनिक दुई करोडभन्दा बढि राजश्व आम्दानी हुँदै आएको थियो ।
कर्मचारीहरुको बदमासीका कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई असफल बनाउने षडयन्त्र अन्तर्गत काण्ड मच्चाइएको केही लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी हकप्रद र बोनसमा समेत अंकित चुक्ता मूल्यको आधारमा लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि लगानीकर्ता थप आक्रोशित भएका हुन् । लगानीकर्ता स्वतस्फूतः हिसाबले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लगानीकर्ताको आन्दोेलनमा विभिन्न पार्टी समुह सम्बद्ध तीन वटा संगठन पनि औपचारिक रुपमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
के हो बोनस र हकप्रद शेयरमाथिको कर विवाद ?
सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरेको तर अर्थमन्त्रालयका एउटा अंगले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा गरिएको पत्राचारमार्फत विवाद सतहमा आएको हो । जुन व्यवस्थाले समग्र शेयर लगानीकर्ताको मुटुमा प्रहार गरेको छ ।
सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर ५.५ बाट बढाएर ७.५५ पु¥याएपछि लगानीकर्ता माथि निश्चित प्रतिशत करको भार थपिएकै थियो । त्यसमाथि झनै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जटिलता समेत रहेको हकप्रद तथा बोनस शेयरको आय गणना गर्दा चुक्तामूल्य अंकित मूल्य कायम गरी गणना गरेर थप आय मानेर कर असुली गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
बोनस र हकप्रद सेयर प्राप्त गर्दा त्यसले विद्यमान शेयरको नेट वर्थ घटाउने भएकाले उक्त विद्यमान पुँजीमा परेको चाप र प्रचलित ब्याजदर र मद्रास्फीति चाप समायोजन गर्न छुट दिइनुपर्नेमा सबै हकप्रद र बोनस सेयरलाई बुक भ्यालुमा गणना गरेर सेयरमा पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको परिपत्र लगानीकर्ताको आर्थिक स्वतन्त्रता विरूद्ध भएको लगानीकर्ताको बुझाई छ ।
हकप्रद र बोनस सेयर दिदा पूरै लाभ भएजस्तो देखिन्छ तर त्यही बोनस सेयरको कारण शेयर संख्या बढ्दा प्रति सेयर आम्दानी घट्न गई त्यसको लागत र चाप मूल सेयरमा परेको हुन्छ । बोनस र हकप्रद शेयरलाई सरकार उपहार वा पुरस्कार पाएको रुपमा मात्रै बुझ्दा र अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई त्यसरी नै बुझाउने प्रयास हुँदा समस्या आएको देखिन्छ । तर, यसमा अर्थका अधिकारीहरुले अपरिपक्व निर्णय गरेको देखिन आएको छ ।
अर्थका अधिकारीले बोनस र हकप्रद शेयर सेकेण्डरी शेयरसँगै जोडिएर मात्रै आउने शेयर खरिदको एउटा हिस्सा हो र यो बाटोमा भेट्टाएको वा उपहार वा दान वा बकस स्वरुप प्राप्त हुने सम्पत्ति होइन । दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार हुने शेयरको हिस्सा हुने हुँदा चुक्ता मूल्यभन्दा बजार मूल्यको आधारमा मूल शेयरसँगै जोडेर हिसाब किताब गरेर मात्रै शेयर कारोबारमा नाफा र घाटा हिसाब किताब गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यही बुझाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई बुझाउनुको साटो अर्थ र आन्तरिक राजश्वका अधिकारीहरुले सरकारलाई असफल बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको देखिन आएको छ ।